ပြိုင်ဘက်တွေထက် ဈေးသိသိသာသာပိုများ‌နေတဲ့ 2022 Mazda MX-30 ! – MyMedia Myanmar
ပြိုင်ဘက်တွေထက် ဈေးသိသိသာသာပိုများ‌နေတဲ့ 2022 Mazda MX-30 !
Mazda ဆိုတာကတော့ ဆီစားသက်သာတဲ့ ကားတွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ နာမည်‌ရထားပြီးသား ဂျပန် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပြီး မြန်မာ ပြည် ကားဈေးကွက်နဲ့လည်း မစိမ်းတဲ့ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်ထိတော့ Mazda အနေနဲ့ လျှပ်စစ်သီးသန့် ဒါမှမဟုတ် Hybrid ကားတွေကို ရောင်းချနေခြင်းမရှိသေးပေမယ့် မကြာခင်မှာ အဆိုပါဈေးကွက်က ပြောင်းလဲလာဖို့ ရှိနေပါပြီ။ သူတို့ရဲ့နာမည်ကျော် ပထမဆုံး လျှပ်စစ်ကား ဖြစ်လာမယ့် 2023 Mazda MX-30 ကတော့ အမေရိကဈေးကွက်ထဲ စတင်ဝင်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပေမယ့် ဈေးက တော့ မသေးလှပါဘူး။ အဆိုပါ ကားသစ်မှာ လျှပ်စစ်မော်တာတစ်လုံး ပါဝင်ပြီး Front-Wheel Drive အနေနဲ့ တပ်ဆင်ထားကာ စွမ်းဆောင်ရည် ကတော့ 143 hp နဲ့ 200 lb-ft Torque အထိရှိလာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကားရဲ့ ဘက်ထရီကတော့ သေးငယ်ပြီး 35.5 Kwh သာရှိထားတဲ့ Lithium-Ion ဖြစ်နေတာကြောင့် EPA ရဲ့ ခန့်မှန်းခြေ Range က မိုင် ၁၀၀ ပတ်လည်လောက်သာ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုလို Specs တွေကို ခဏမေ့ထားပြီး ဈေးသား အသင့်အတင့် ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင် တော့ မဆိုးဘူးလို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် Mazda ရဲ့ ဈေးနှုန်း တွေကတော့ များနေပြန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Mazda ရဲ့ ဖော်ပြချက် အရတော့ 2022 MX-30 ဟာ $ 33,470 နဲ့ စတင် မှာ ဖြစ်ပြီး $ 31,995 သာ ရှိ‌တဲ့ Chevy Bolt ထက်တောင် ဈေးကြီးနေတာပါ။ Nissan Leaf ကတော့ $ 27,400 ကျသင့်ပြီး Mini Cooper SE ကတော့ $ 29,900 လောက် ကျသင့် နေတာ ဖြစ်ကာ အဆိုပါကားတွေကတော့ အခု MX-30 ထက် ဘက်ထရီပမာဏ အရရော Range ပါသာလွန် နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Tesla Model3ရဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၂ အတွက် Standard Range Plus ကဈေးပိုကြီးတဲ့ လျှပ်စစ်ကား အဖြစ် $ 39,990 လောက် အထိ ရှိနေပေမယ့်လည်း ကားဆီက ပြန်ရမယ့် Range ကတော့ ၂၆၃ မိုင် အထိရှိတာကြောင့် တကယ်တန် တယ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။
Mazda ကတော့ သူတိုရဲ့ ပထမဆုံး လျှပ်စစ်ကားအပေါ်မှာ မြိုတွင်း သွားလာချင်တဲ့ သူတွေအဖို့ ပိုရည်ရွယ်တယ်လို့ ဆိုထားပေမယ့်လည်း တကယ်တမ်း ဒီ ဈေးနှုန်းနဲ့ မိုင် ၁၀၀ Range ဆိုတာကတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာ တကယ်ကို နိမ့်နေပါသေးတယ်။ လက်ရှိ လျှပ်စစ်ကား ဈေး ကွက်ထဲမှာ ဈေးအသက်သာ ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Leaf တောင်မှ Base Trim Level မှာတင် ၁၄၉ မိုင် အထိ ရှိနေပြီး Mini Cooper SE တောင်မှ ၁၁၄ မိုင် Range ရထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုလို Range နည်းနေတာကို နည်းနည်း နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်ဖို့ ဆိုပြီး Mazda က ပြန်ဖြေသိမ့်ပေး ထားတဲ့ အစီအစဉ် တစ်ခုတော့ ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Chargepoint နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး MX-30 ပိုင်ရှင်တွေအတွက် ဒေါ်လာ ၅၀၀ Charging Credit ပေးဖို့ ဖြစ်ကာ In-Home Level2Charger နဲ့ တွဲဖက်ကာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Level2Charger နဲ့ ဆိုရင်တော့ ၂ နာရီ နဲ့ မိနစ် ၅၀ လောက် အတွင်းမှာတင် MX-30 ကို ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ ဘက်ထရီ အားပြည့်အောင်သွင်း ပေး နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး DC 50 Kw ရှိတဲ့ Level3Charger နဲ့ ဆိုရင်တော့ အခုပမာဏရဖို ၃၆ မိနစ် လောက်ပဲ ကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်ပိုနိမ့်တဲ့ Level 1 AC 120 V Charge နဲ့ ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ ပမာဏ ရဖို့ကို ၁၄ နာရီနဲ့ မိနစ် ၄၀ လောက်အထိကို ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Mazda ကတော့ MX-30 ဝယ်ထားမယ့် သူတွေဟာ ခရီးဝေး သွားချင်ရင် သာမန် Gas သုံး ကားတစ်စီး လိုကိုလိုဦးမယ် ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိ ထား ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း Elite Access Loaner Program ဆိုတာကို ထပ်မံ စီစဉ် ပေးထားပြီး လျှပ်စစ်ကားပိုင်ဆိုင်နေတုန်း ပထမ ၃ နှစ် အတွင်းမှာ နောက်ထပ် Mazda ကား တစ်စီးကို ၁၀ ရက် လောက် အထိ ယူသုံးနိုင်ဖို့ ပြုလုပ် ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် MX-30 ရဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ အပြင်အဆင်တွေကတော့ ကျေနပ်ဖွယ်ရာ ကောင်းနေပြီး ၈.၈ လက်မရှိ Infotainment Display ၊ Heated Front Seats တွေ အပြင် Heated Power-Folding မှန်တွေနဲ့ Power Moonroof လည်း ပါဝင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံကိုလည်း ပုံစံ ၈ မျိုး လောက် အထိ ပြောင်းလဲ ပေးထားနိုင်အောင် စီစဉ်ထားသလို Rear Parking Sensors တွေနဲ့ ၁၈ လက်မ အရွယ် ဘီးတွေကိုလည်း မြင်ရဦးမှာ ပါ။ Ceremic Metallic ၊ Polymetal Gray နဲ့ Jet Black အရောင်ကတော့ နဂိုပါဝင်လာမယ့် တစ်ရောင်တည်း သုံးကာလာ အသစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Dark Grey Roof အမိုးရောင် နဲ့ Silver D-Pillar အရောင် ကိုတော့ နောက်ထပ် ကားကိုယ်ထည် သီးသန့်အရောင်တွေနဲ့ တွဲစပ်နိုင်ဦးမှာပါ။ အဆိုပါ ကားကိုယ်ထည် အရောင်သစ် တွေကတော့ $ 895 ကျသင့်မယ့် Polymetal Gray အရောင် နဲ့ Ceramic Metallic အရောင်အပြင် $ 995 အထိ ကျသင့်မယ့် Soul Red Crystal အရောင်ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် $ 36,480 အထိကျသင့်မယ့် MX-30 Premium Plus Package ကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးထားသေးပြီး အဆိုပါ Package မှာတော့ i-Activsense Safety Features တွေ ပါဝင်လာမှာပါ။ အဆိုပါ လုံခြုံရေးစနစ်မှာတော့ Blind Spot Assist ၊ Front Cross-Traffic Alert စနစ်ပါဝင်လာပြီး Bose ရဲ့ စပီကာ ၁၂ လုံးပါ အဆင့်မြင့် အသံ စနစ် ၊ ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ်လည် ရှိကင်မရာ၊ ကားအတွင်း ကို ‌သော့မလိုပဲ ဝင်ရောက် နိုင်တော့မယ့် အဆင့်မြင့် စနစ်နဲ့ အတူ အခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်း ထည့်သွင်း ပေးထားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
အခုကားသစ်ရဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ Range ကို ကြည့်ရုံနဲ့ တင် Mazda အတွက် MX-30 က ရောင်းအား အဆမတန် ကောင်းမယ့် ကားတစ်စီးလို့ တော့ မမြင်မိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အခုထိတော့ အဆိုပါ ကားကို ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် ထဲမှာ ရောင်းချဖို့ စီစဉ် ထားဟန်တူ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Mazda တို အကြီးကြီး ကြံ နေတာ တစ်ခုကတော့ Rotary Engine ပါတဲ့ Range များများနဲ့ မျိုးကွဲ ကားတစ်စီး ဖြစ်ပြီးတော့ လာမယ့် ၂၀၂၃ အတွက် ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အဆိုပါ စီမံကိန်း ဖြစ်လာ မဖြစ်လာ ဆိုတာကတော့ မသေချာ သေးလို့ စောင့်ကြည့်ရဉီးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု 2022 MX-30 ကား ကတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယားက အရောင်း ကိုယ်စားလှယ် တွေထံကို လာမယ့် ၂၀၂၂ အောက်တိုဘာ လထဲမှာ ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး အကြိုမှာယူမှုတွေ ကိုတော့ အခုကတည်း က လက်ခံနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ပြိုင်ဘက်တွေထက် ဈေးသိသိသာသာပိုများ‌နေတဲ့ 2022 Mazda MX-30 ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-08-26T15:01:50+06:30August 26th, 2021|MYCARS MYANMAR|